अस्ट्रेलियन कम्पनी 'आइडिपी' किन नेपाल भित्रियो, के-के सुविधा दिन्छ? (भिडिओ) :: सेतोपाटी :: Setopati
हात्तिसारस्थित आइडिपी एजुकेसन नेपाल विश्वव्यापी शिक्षा सेवा प्रदायक अस्ट्रेलियन कम्पनी हो। पचास वर्ष लामो इतिहास बोकेको आइडिपीले हालसम्म लाखौं विद्यार्थीको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षासम्बन्धी सपना पूरा गर्न मद्दत गरेको छ।
आइडिपी आइइएलटिएस (IELTS) को सह-सञ्चालक हो। आइइएलटिएस संसारमा एकदमै चल्तीमा रहेको अंग्रेजी भाषाको परिक्षा हो। नेपालमा सन् २०१८ देखि आइडिपीले सक्रिय रूपमा आफ्नो सेवा निरन्तर विस्तार गर्दैछ।
आइडिपी एजुकेसन नेपालमा किन भित्रियो र यस कम्पनीले के-के सुविधा दिन्छ भन्नबारे आइडिपी एजुकेसनका ज्वाइन्ट भेन्चर पार्टनर भूपेन्द्र सिटौला र कन्ट्री डाइरेक्टर अभिषेक श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्।
आइडिपी एजुकेसन नेपाल भनेको के हो र यो नेपालमा किन भित्रियो?
आइडिपी एउटा सेयर बजारमा सूचिकृत अस्ट्रेलियन कम्पनी हो। आइडिपीले हाल संसारको पचासभन्दा बढी देशमा आफ्नो सेवा सञ्चालन गर्दैछ। यस कम्पनीले हालसम्म पाँच लाखभन्दा बढी विद्यार्थीलाई आवश्यक परामर्श सेवा दिएको छ।
आइडिपीले विद्यार्थीलाई नि:शुल्क अध्ययन परामर्श, भिसा आवेदन प्रक्रियामा सहायता गर्ने, प्रि-डिपार्चर सहयोग गर्ने जस्ता सेवा पनि दिँदै आएको छ। आइडिपीले क्यानडा, बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड र आयरल्यान्ड जस्ता देशका लागि परामर्श दिँदै आएको छ।
विगत १५-१६ वर्षदेखि नेपालमा विद्यार्थी र अभिभावकहरूले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा सेवामा ठूलो अवसर गुमाइरहेका थिए। त्यो अवसरलाई नेपाली विद्यार्थी र अभिभावकसम्म पुर्‍याउन आइडिपी नेपाल भित्रिएको हो। राम्रा विद्यार्थीहरूका लागि बस्नदेखि छात्रवृत्तिसम्मको व्यवस्था पनि मिलाइदिने गर्छौं।
आइडिपीको लक्ष्य के हो?
आइडिपीको लक्ष्य विद्यार्थीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षामार्फत करिअरमा सक्षम बनाउन मद्दत गर्नु हो। अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाले डिग्री प्राप्त गर्न मात्र नभएर विद्यार्थीलाई बहुसाँस्कृतिक समाजमा भिज्न र घुल्न उजागर गर्छ। यसले उनीहरूलाई विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी नागरिक बनाउँछ।
हामीले विद्यार्थीको रूचि बुझेर उनीहरूलाई सबैभन्दा भरपर्दो र उत्कृष्ट कलेज र विश्वविद्यालयमा शिक्षा हासिल गर्न मिल्ने वातावरण मिलाइदिन्छौं।
आइडिपीको अरूभन्दा कसरी भिन्न छ?
आइडिपीको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको यहाँको दक्ष परामर्शकर्मी र सल्लाहकार हुन्। विश्वव्यापी रूपमा १३०० भन्दा बढी उच्च प्रशिक्षित सल्लाहकारहरू रहेको आइडिपीमा विद्यार्थीहरूले निःशुल्क परामर्श सेवा लिन सक्छन्। सल्लाहकारहरूले विद्यार्थीहरूलाई दैनिक रूपमा भेटेर सल्लाह दिन्छन्। उनीहरूले विद्यार्थीलाई राम्रो र गुणस्तरीय करिअर छान्न मद्दत गर्छन्।
आइडिपीको अर्को राम्रो पक्ष भनेको हामीले ८०० भन्दा बढी विश्वविद्यालय र कलेज संस्थासँग समन्वय गरेका छौं। यसले गर्दा विद्यार्थीले विविध विकल्प र अवसरहरू पाउँछन्।
विद्यार्थीले नेपालमा रहँदा हाम्रा सेवा-सुविधाहरू प्रयोग गर्छन् नै। विदेशमा पनि नेपालका विद्यार्थीहरूले हाम्रा सबै कार्यालयहरूबाट सेवाहरू प्राप्त गर्छन्। विदेशमा कुनै किसिमको समस्या वा सुझाव भएमा हाम्रो नजिकैको जुनसुकै कार्यलयमा गएर सेवा लिन सकिन्छ।
विश्व बजारलाई नियाल्ने हो भने हाम्रो भिसा सफलता दर औसतभन्दा धेरै राम्रो छ। आइडिपी विश्वव्यापी रूपमा भरपर्दो नाम हो। अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाका लागि विदेश जाने सोचिरहेका विद्यार्थीहरूका लागि यो एकदमै भरपर्दो छनोट हुन सक्छ।
आइडिपीले आयोजना गर्न लागेको जनवरी २२ फेयर के हो?
आइडिपीले विगतमा विभिन्न एजुकेसन फेयर, लाइभ काउन्सिलिङ सेसनलगायत कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आएको छ। पछिल्लो लकडाउनमा पनि आइडिपीले अनलाइनमार्फत सयौं विद्यार्थीलाई दैनिक रूपमा शिक्षा परामर्श गर्दै आएको थियो।
यसैगरी जनवरी २२ अर्थात् माघ ८, शनिबारको दिन हामीले क्यानडा, बेलायत, र अमेरिका एजुकेसन फेयर आयोजन गर्दैछौं।
अहिले कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै आइडिपीले यो फेयर पनि भर्चुअल रूपमा गर्दैछ। यो फेयर दिउँसो १ बजेदेखि ५ बजेसम्म हुनेछ।
भर्चुअल फेयरमा सहभागी हुन भिडिओको स्क्रिनमा देखिने क्युआर कोड स्क्यान गरेर दर्ता गर्न सकिनेछ।
यो एजुकेसन फेयरमा क्यानडा, बेलायत र अमेरिकाका ३० भन्दा बढी विश्वविद्यालय र कलेजको उपस्थिति हुनेछ। विद्यार्थीहरूले उक्त फेयरमार्फत ती विश्वविद्यालय र कलेजहरूबारे जानकारी लिन सक्नेछन्।
कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले निःशुल्क परामर्श लिने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ ५, २०७८, ०२:५७:००
कर्टिन युनिभर्सिटीकी सिनियर म्यानेजर भन्छिन्- अष्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थीको माग धेरै छ
नेपाल भित्रियो बबक्याटको नयाँ ब्याकलोडर, के-के छन् विशेषता? (भिडिओ)